कृष्णबहादुर महराको खुलासा : यसरी हुदैछ बाम एकता | mulkhabar.com
कृष्णबहादुर महराको खुलासा : यसरी हुदैछ बाम एकता
December 31, 2017 | 10:35 am 345 Hits
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता जनअनुमोदित भइसकेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा। अब चाहेर पनि दुवै पार्टी एकताबाट पछि हट्न नसक्ने उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रिया र नयाँ सरकार गठनबारे महरासँग अन्नपूर्ण पोष्टका लागि रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी –
तपाईंहरूको पार्टी जीवनमा निकै उतारचढावपूर्ण देखिँदै छ नि ?
जनयुद्ध, शान्तिप्रक्रिया र अहिलेको चरणलाई माओवादीको पार्टी जीवनसँग जोडेर उतारचढावपूर्ण भन्न खोज्नुभएको हो ?
कहाँ पुग्यो पार्टी एकता प्रक्रिया ?
पार्टी एकतामा वैचारिक–राजनीतिक प्रधान पक्ष प्रधान छायामा परेको र पदीय व्यवस्थापनका विषय मात्र छलफलकेन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ नि ?
तपाईंहरू पहिले एमालेलाई संशोधनवादी धाराको नेतृत्व गर्छ, हामी क्रान्तिकारी धारको भन्नुहुन्थ्यो।, तपाईंहरूका आआफ्नै मान्यता छन्, एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद र बहुदलीय जनवाद जस्ता।।।। अनि मिलन बिन्दु कहाँ फेला पर्‍यो पार्टी एकताको ?
एकजना साथीले भनेको सुनें– अब जबज पनि हट्छ, एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद पनि हट्छ र नयाँ हुन्छ भनेर। पार्टी एकतापछि हुने त्यही हो। उहाँहरू ९एमाले० ले हामीलाई आरोप लगाउँदा भन्नुहुन्थ्यो– जनयुद्ध अपराध हो, सैद्धान्तिक भूल हो। हामीले पनि उहाँहरूलाई संशोधनवादी भनेकै थियौं, अब चिज त्यसरी रहँदैन, विषय माथि उठ्छ। एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर मात्र हुँदैन।
पार्टी एकता गर्ने विषय कम्तीमा आधारभूत राजनीतिक विषय जस्तो विगतलाई मूंल्याकन गर्ने सन्दर्भमा पनि एकरूपताको खोजी त गर्नुपर्ला, यसमा तपाईंहरूमा अन्तर अझै देखिन्छन् ?
पार्टी एकताका प्रसंग चलिरहँदा अन्तरपार्टी वैचारिक बहस भएको देखिँदैन, मूल नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्ने, विचारशून्यताको संस्कार दुवै पार्टीमा विकास भएर गएको होर ?
पार्टी एकताका लागि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् ?
पार्टी एकताको कुरा निर्वाचनअगाडि उत्साहजनकरूपमा र पछिल्लो चरण शंका–आशंकाका रूपमा हेर्नुपर्ने गरी आइरहेको देखिँदैछ नि ?
नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूतहरूले त्यहाँका मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा वा लेख नै लेखेर उत्तरको हात रहेको बताइरहेका छन् त, त्यसलाई कसरी असत्य भन्ने ?
पार्टी एकतामा भारतीय र चिनियाँ चलखेल छैन भने पार्टी एकताको गाँठो किन फुस्किन सकेको छैन त ?
अहिले दुई नेताहरू बसिरहनुभएको छ। संयोजन समिति बस्छ। संयोजन समिति बसेपछि कतिपय प्राविधिक विषय कसरी मिलाउने रु छलफल हुन्छ। यो टुंगो लाग्छ। कतिपय विषय बाँकी रहन्छन्, त्यसमा नेताहरूका बीचमा छलफल हुँदै संयुक्त महाधिवशेनसम्म पनि जान्छ।
छिटै हुन्छ। सरकार बन्ने प्रक्रियामा हिजो ९शुक्रबार० अध्यादेश जारी भएपछि अगाडि गएको छ। यो सँगसँगै अब पार्टी एकता प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ।
नयाँ सरकार गठनमा गृहकार्य भइरहेको होला नि ?